Maxaad The E-skeidgareeyo Sidaas xareysatay Oo Soo dhaweeyay Waxaad By. - Jomo Technology Co., Ltd
Taasi waa si buuxda run, markii ay ku yidhaahdeen ay tahay mid gaar ah, waxaa jira nooc ka mid ah sidaas loo yaqaan macruufka suuqa horeba. Kuwani waxay gacanta-free mootooyinka korontadaama skeidgareeyo korontada la qaadi karo si a million goobood, ma laha waxa aad u yeedhay. Koowheel version cusub Electric skeidgareeyo Kooboard: Taasi waa hab fiican oo loogu talagalay dadka dhallinyarada ah ay leeyihiin xiiso leh oo ka dhimo waqti isku mid ah. Waxaan qaato xiiso leh of skeidgareeyo ah, ka dhigi sida u fudud in ay isticmaalaan sida mooto motor ah, ka dib markii taas oo ku siinayaa xoogaa ah oo dheeraad ah oo yaryar oo swag. Electric skeidgareeyo waxaa lagu cabudhiyay xiiso leh iyo waxa uu noqonayaa hiwaayad dadka badan oo dhallinyaro ah. Skeidgareeyo An korontada waxaa loogu talagalay oo ka brand Koowheel asalkiisu ka soo jeedo ee Shiinaha.
Sidaas darteed, waxay sheegtay in, in lagu skeidgareeyo ma ahayn oo keliya aalad a safarka laakiin sidoo kale hagaajiyo tayada nolosha qof jidka qaar ka mid ah. Waxaa dari karaa dabacsanaan iyo safar macaan. Haddii aad tahay ilaalo ugu jirnaa hab gaar ah ee gaadiidka in aad qaadi karto oo ka mid ah meel kale, si deg deg ah, waa in aad doorato qaabkoodoo macaamilka. Qayb muhiim ah oo ka mid ah madaxda gaadiidka u hureen waa in baabuur aad u hesho ka hormariyaan baabuurta shakhsi ahaaneed ee la dhigto khuseeya waddada yar. The shaqsiyaadka baahsan ayaa, markii ugu aasaasiga ah, bilaabay in ay dunida ka mid ah gaadiidka is-dheelli.
Koowheel Iskeetboodhyada waxaa dhisay tur iyo awood badan inta aad la siinayo safarka smoothest halkaas. Inta aannu cilmi waxaan ogaanay in quruumo badan Asian lahaa hore u ballaaran ka xoogbadan, electro-socodka iyo bartey, oo dhan safar ganacsi ah, aan la hor mootooyinka korontada, dul istaagin looxyada iyo - rullebrett! Baytariyada waxa ay la adeegsado danab aan sax ahayn ama unugyada haleysan yahay oo dhowr loox dulsaar dab qabsaday halka ku amraya ama fuushan. Laakiin sidaas maaha arrin ah strangest ku saabsan iyaga-in ay noqon kartaa xaqiiqda ah in abaal fasaxa ugu kulul ee sanadkan xajisto qaadaan on dabka. Waxa aad marka hore aad dareento mar kasta oo aad eegto mooto xamuul cusub run ahaantii waa maqnaansho, ama farqi ah, in koorsada of mishiinka. Koowheel waa sameeyey isku dheelli mooto Chinese in uu qarka u saaran inay soo dhaamiso noocyo badan oo hoverboard sababta oo ah design moodada.
waqti Post: Oct-19-2017